Saaqidnimadu Calaf maahan. Cashar ka baro is-badbaadintii Cabdullahi Sheekh Xuseen
By ibrahim Aden shire September 04, 2017
Sheekadaan maahan mid shaqsi lagu dhaliilayo ama lagu amaanayo ee waa mid loola jeedo inay cashar ka bartaan caruurteena tusaale fiicana u noqoto kuweena waqti badan ka lumay hadana meel ay ka billaabaan garan la’ sidaa darteed ku aqri qalbi furan oo cashar qaadasho diyaar u ah.
Cabdullahi waxa uu ku dhashay muqdishu wax yar un ka hor dagaalki sokeeyo. Qoyskiisu waxa uu ka mid noqday dadkii ka qaxay Xamar waxay haysteen oo dhanna kaga yimid caasimada. Waxay soo dageen dagmada Garbahareey oo ay guri dhab ah ka dhigteen wixii ka danbeeyay waqtigaas.
1993-di Cabdullahi waxaa la geeyay iskoolki ugu horeeyay ee magaalada laga furo tan iyo marki ay dhacday dowladdi kasoo ay howl galisay ilaa maantana ay gacanta ku hayso hay’adda NCA. Sidoo kale, Cabdullahi waxaa la geeyay dugsi Qur’aan kasoo aan anigu kabiir ugu ahaa sandihii 1994-ti ilaa 1995-ti. Cabdullahi wuxuu noqday arday maskax furan kuna fiican wax barashada taasoo dhiiri galisay aabihii Sheekh Xusseen Allaha u raxmadee.
Aaabihi oo ahaa culumo, af-gaaban, dantiis aqoodna ah, waqtigaasna haystay shaqo wanaagan oo qoyskiisa ka dhigtay mid ka mid ah kuwa ugu nolosha fiican magaalada ayaa Cabdullahi la damcay himilo sare iyo inuu qaado dariiqiisa. Gacanta ayuu ku qabtay waxa uuna hubiyay inuu mashquul ku ahaado waxbarasho. iskoolka iyo dugsiga uu Qur’aanka ku barto waxa uu ugu daray inuu geeyo casharada diiniga ah ee masaajidka ka baxo. Wayaadaas waa markii uu Sheekh Xuseen dheere Allaha xafidee magaalada yimid oo uu ka billaabay darsigii naxawaha carabiga, dad kuna aad xiise ugu hayeen.
Cabdullahi Qur’aanki waa xafiday, iskoolki oo ku ekkaa fasalka shanaadna waa uu dhameeyay laakiin markaan waxaa uu noqday kuray xoog leh waana isu soo shiiray. Isbadalka ku dhacay jirkiisa sida uu la qabo kuwa aynigaas ah ee aduunka ku nool, waxa uu keenay inuu noqdo qof kale. Maahan Cabdullahigii aabihii maqli jiray, maahan ninkii waxbarashada jeclaa, maahan ninkii salaadda amin hore u kici jiray. Waxaa is badalay dhamaan dabeecadihii wanaagsanaa ee aabihii rajo galiyay.
Dagaal kulul ayaa ka dhex curtay isaga iyo aabihii. Cabdullaahi saacad shanlaysi iyo is-toostoosin ah ka dib wuxuu aadaa suuqa oo uusan wax camal ah ka qaban. Casarkiina wuxuu isku jaqanjooqiyaa daba-gaab iyo kabo isboortis oo kubbad ayuu buraashadda u dhaansadaa. Dhinaca kale aabihii usha ayaa garabka u saaran oo inuu dabcigaan cusub xoog ku badalo ayuu rabaa. Wixii dhuyac dhulka ku yaalay dhabarka cabdullahi ayayay ku dhamaadeen laakiin waxbo waa ka badali wayday ugu danbayna aabihii ushi waa dhigay waxa uuna go’aansaday inuu isaga ka dhursugo.
Garbahareey oo can ku ah inay dhalintu ka haajiraan, Cabdullahi waa hayn wayday sidaa owgeed waxa uu go’aansaday inuu isaga tago. Maadaama uu ogaa in aabihii waxbarasho la jecelyahay waxa uu u keenay in Xamar waxbarasho loogu diro. Aabihii oo aad ugu farxay soo noqoshada cabdullahi balse aanan ogayn qorshaha u qarsoon ayaa dag-dag ku aqbalay codsigii wiilkiisa.
Cabdullahi Xamar ayuu tagay iskool madax qarsi ahna waa bilaabay, aabihiina lacag ayuu kusuu hurgufay si uu maadooyin kala duwan u qaato watigii la lumayna ooga daba tago. Maadaama ujeedka Cabdullahi uusan waxbarsho ahayn, muddo yar ka dib Xamar waa uu ka xiiso dhacay sidaa darteed isagoon cidna u sheegin ayuu Garbahaareey gaari usoo fuulay. Wiilkii jaamacadda loo diyaarinayay oo guriga kaadkiisa taagan ayaa la arkay, yaab iyo amakaak ayay aabihii ku noqotay aad ayuuna ooga xumaaday.
Wixii cusub caalamkaa jecele, waqtigaan uu Cabdullahi Garbahaareey kusoo laabtay, waxay ahayd marki dagaaladii itixaad iyo SNF socdeen sidaa darteed wiilasha magaalada ugu shidan waa kuwa qoryaha wato. Cabdullahi waxa uu u xiisay qoriga iyo tuutaha isku qoofalan ee dhalinta la ek ay xiran yihiin. Waxaa uu isku dayay inuu ku biro maleeshiyaadki hubaysaa laakiin aabihii ayaa yiri geeri ayaan ka xigaa inaad aniga I xabaasho marka hore ayaad qori ku qaadan kartaa. Arintaas Cabdullahi meel uu ka maro waa waayay waana aqbalay laakiin waxay furtay fursad kale oo aabihii qorshe kale ku marsiisan karo.
Cabdullahi oo bartay meesha aabihii ka jilicsanyahay ayaa la yimid qorshe kale oo ahaa in waxbarasho Nayroobi loogu diro, aabihiina waa aqbalay oo ugu yaraan inuu qori qaato ayuu ka badbaadi ayuu is yiri sidaas ayaana mar kale Cabdullaahi oo sifiican loo sahayay Nayroobi loogu diray.
Nayroobi waxaa uu ka bilaabay barashada luuqada Ingiriiska laakiin isla markiiba waxaa ku dhacay cudurka buufiska oo Nayroobi si baahansan ooga socday waqtigaas. Abihii waxaa uu usoo diraa lacag uu wax ku barto dhinaca kale isagoo kaashanayo dad kale ayuu u raadinayay waxbarasho sare oo wadamo kale ah ugu danbayna waxaa usoo baxday jaamacad Pakistaan ah. Laakiin cabdullaahi waxbarashada waa ku lafa ruugaaye inuu wax barto uma jeedo.
Meeshi laga filayay inuu jaamacadda Pakistaan u aado, mar kale ayaa la arkay isagoo aqalki hooyadii ee Garbahaareey muskiisa taagan. Yaab badanaa! War maxaa ku keenay oo aad soo doontay? Meeday jaamacaddi waqtiga iyo qarashki nooga baxay? Ayuu waydiiyay aabihii. Si kooban ayuu Cabdullahi ku yiri anigu dhoofitaan ayaan rabaa ee I dhoofi markaan dibada tago ayaan waxbaran doonaaye.
Markaan aabihii xaqiiqda cabdullaahi ayuu fahmay, waxa uuna isku qanciyay kan haddaad isku dhoofiso kaniisada iyo ama meelaha khamriga lagu dhamo ayuu safka hore noqon. Waxa uu ku yiri waan ku siiyay fursad kasta oo aan awooday, waqti iyo maalba waan ku bixiyay inaad dad noqoto laakiin meel uma socotid marka magaalada dhinac ka gal oo sida aad adigu jeceshahay yeel.
Cabdullahi waxa uu aqbalay saaqidnimadi, kubbad cayaar, suuq wareeg iyo caruuraynti ayuu iska watay isagoo labaatan jir ah. Sidoo kale waxa uu bartay sida baabuurta loo wado waxa uuna jeclaaday inuu wade ka noqdo gaari ay lahaayeen oo hay’ad u kiraysnaa. Aabihi ayaa ku yiri haddii aad shaqo diyaar u tahay mid aad adigu ku shaqaysato ayaan kuu iibin isaguna waa yeelay.
Balse shaqadii cusbayd ee Cabdullahi waxay galisay bad kale oo beerta ayuu sifiican u tiimbaday. Caruuraynti barjayn iyo soo jeed badan ayuu ku daray. Inkastoo uu xanta maqlay aabihii waxba kama uusan qaban Karin oo markaan Cabdullaahi waa nin weyn. Cabdullahi oo gaarigi ku shaqaysto howlihiisana iska wato balse damac leh ayuu geeriyooday aabihii Allaha u raxmadee.
Geeridi aabe waxay keentay in Cabdullahi masuuliyad badan la wareego: baabuurki uu isagu waday iyo kii hay’adda u kiraysnaa maamulkooda, ka warqabka caruurta kale iyo caawinta hooyadii. Inkastoo Cabdullaahi masuuliyaddaas uu qaatay iskuna dayay inuu caawiyo reerka waxaa aad oogu mashquuliayay howlihii uu ku jiray oo markaan uu xorriyad dheeraad ah u helay. Baabuur qurux badan iyo shaqo hay’adeed ayuu isla helay. Habaynba inuu magaalo ku caweeyo ayay noqotay dhalintuna daba yaacaan.
Caano daatay dabadoodaa la qabtaa
In kastoo wajiga nuurayo, labiska quruxda badan ee uu xiranyahay iyo dhoolla cadaynta uu dadka tuso darteed ay dadku u haysteen inuu farxad ku noolyahay, Cabdullahi qalbiga ayuu ka gubanayay. Walwalka iyo walbahaarka ay abuurtay dunuubta caadada uu ka dhigtay iyo saaqidnimada kusii kordhayso ayaa dhimbilo dab ah ku shiday laabtiisa. Su’aalo aan dhamaad lahayn jawaabna uusan hayn, qorshe maalinle ah balse aan lagu dhaqaaqin iyo walwalka ka hayo noloshiisa sii lumayso ayaa ku cariiriyay dhulki waasaca ahaa. Maanta ma uu hayo cid uu qorshe kale u keeno. Ma uu hayo qof uu isku halayn karo haduu is badali lahaa. Sidoo kale kuma kalsoona in dib loo aamini doono hadduu yiraahdo waan toobad keenay waana toosayaa. Laalaabkii hore ee lagu bartay ayaa dhammaan albaabadi ka xirtay.
Dhowr jeer ayuu saaxibadii kusoo qaaday inuusan ku faraxsanayn nolosha uu ku jiro, jecelyahayna inuu isaga baxo oo uu wax barto laakiin saaxiibadaa oo noloshiisa aan dan ka lahayn waa ay niyad jabiyeen waxa ayna ku qanciyeen inuusan waligiis helayn waxa uu maanta haysto hadii uu ka tago. Qaar waxay ku yiraahdeen wax ma barin kartide waqtiga ha iska lumin. Qaar waaba ku qoslayn oo waxay ku yiraahdeen sheekadii waalida iyo buug aan wax lagu keenayn wadashada ahayd miyaad rabtaa inaad gasho.
Habayn ayuu Cabdullahi go’aan dhab ah gaaray. Haa go’aan aan ka noqosho lahayn wax walba oo dhaca. Hadduu taageero helo iyo hadiiba kalaba inuu isbadalo oo nolashiisana saxo ayuu go’aan ku gaaray. Waxaa uu wareejiyay gaarigii uu waday, waxaa uu iska casilay shaqadii uu hayay, wuxuu iskubaanka garabka u gashaday Nayroobi oo uu markaan si dhab ah ugu xeraystay.
Hooyo intaan noolahay wax waayi mayside horay u soco
Waa uu ka dhabeeyay go’aankiisi waxbarasho ayuuna ka bilaabay Nayroobi, intuu waday barashada luuqada iyo maadooyinka kale ee looga baahnaa inuu jaamacad galo wuxuu sii waday raadinta jaamacad aqbasho. Balse caqabadda hadda haysato waa helidaa cidii bixin lahayd waxbrashadiisa. Hooyadii wajiga ma siin karo oo wuxuu ka cabsi qabaa inay tiraahdo riwaayad kale miyaad ii jilaysaa sidaa darteed waxa uu la xariiray qaraabo uu dibadda ku lahaa oo uu waydiisatay inay ka dhiibaan qarashaadka waxbarashada balse waa uu ku hungoobay.
Jaamacadi ayaa usoo baxday isagoon hayn cid damaanad qaado noloshiisa, ugu danbayna waxay huri wayday inuu hooyadii la hadlo una xog waramo. Hooyadii ayaa ku tiri haddii ay kaa daacad tahay wax waayi mayside horay u soco sidaas ayuuna Hindiya ku aaday oo jaamacad ooga bilaabay.
Cabdullahi waxaa uu dhamaystay darajadi koowaad ee jaamacadda (Degree), hadaba wuxuu isku garab wadaa labo master (darajada labaad ee jaamacada) oo kala ah MBA .master of business administration iyo MA master of public administration oo bilo kaliya oo dhiman yihiin. Sidoo kale, si uu waqtiga yare e u soo haray ooga faaiidaysto waxaa uu bartaa koorsooyin kumbiyuutar ah oo hadda uu ku dhowyahay inuu shahaado sare ka qaato.
Cabdullahi maahan doob dab iyo reer laawe ah oo u go’ay waxbarasho ee waa xaasle aabo ah si fiicana reerkiisa u dhaqdo. Sidoo kale wuxuu caawiyaa dadka soomaaliyeed ee danaha kala duwan u yimaado magaalada uu ku noolyahay ee Haydarabaad taasoo uu ku kasbaday sumcad keentay in la isaga soo tilmaamo meelo badan.
Maxay na baraysaa sheekadaan?
Sheekada Cabdullahi waxay na baraysaa inay saaqidnimadu aysan ahayn calaf laguu qoray ee ay tahay wax aad adigu dooratay haddii aad doontana aad badali karto. Sidoo kale waxay na baraysaa in saaxiibadaada xun ay saamayn weyn ku leeyihiin fasaadka noloshaada sidaa awgeedna ay muhiim tahay inaad la saaxiibto dad wanaagsan.
Dhakinta da’da yare e hadda ku socoto dariiqi uu qaaday Cabdullahi marki uu yaraa hadda ha wajaheen howl ay kusoo noqon doonaan toban sano jeer xeero iyo fandhaal kala dhaceen.
Haddii uu waqti badan kaa lumay, waalidkaa kaa quusteen, xoolo badan aad lumisay ha quusan ee is daba qabo, is badal dhab ahna same. Waxbarashadu ma lahan waqti ay ku ektahay ee mid furan inta ay naftu kugu jirto.